BURMA: Online News & Analysis: January 2010
ဂိုဂဲလ်၏ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း တရုတ်နိုင်ငံမှာ ရပ်ဆိုင်းပစ်ဖို့ စဉ်စားနေပြီ
တရုတ်အင်တာနက်သုံးစွဲသူများ ဂိုဂဲလ် ကုမ္ပဏီ ဌာနချုပ် ကို လာရောက်ပြီး ၀မ်းနည်းကြောင်း ဂါရ၀ပြု
တရုတ်နိုင်ငံမှာ အင်တာနက် သုံးစွဲမှုကို နည်းမျိုးစုံ တိုက်ခိုက်ခံနေရမှု၊ ဆင်ဆာပိတ်ဆို့ထားခံနေရမှု နှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ခိုးယူကြည့်ရှု့ ခံနေရမှုများ အကြိမ်ကြိမ်ခံခဲ့ကြရပြီးနောက် ဂိုဂဲလ် ကုမ္ပဏီ က သူတို့ရဲ့ အင်တာနက် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုရပ်ဆိုင်းပစ်ဖို့ စဉ်စားနေပြီလို့ ယနေ့ထုတ်ပြန် ကြေညာလိုက်ပါသည်။ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာ ဂိုဂဲလ်ကုမ္ပဏီ ပြောခွင့်ဆိုခွင့်ရှိသူ တစ်ဦးက ကုမ္ပဏီရဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအရ ကုမ္ပဏီကြီးပေါင်း ၃၄ ခု ဟာ တိုက်ခိုက်ခံ ခဲ့ရပြီး၊ ကုမ္ပဏီ၏ အရေးကြီးအချက်အလက်များ ခိုးယူဖို့အကြိမ်ကြိမ် ကျိုးစားခဲ့ကြကြောင်း အတည်ပြု ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ တရုတ် လူ့အခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူများ၊ တီဗက် အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးသမားများ၏ ဂိုဂဲလ်အကောင့်များကိုလည်း ဦးစားပေး ပစ်မှတ်ထားကာ အကြိမ်ကြိမ် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး၊ သတင်း အချက်အလက်များကို ခိုးယူခဲ့ကြောင်း အထောက်အထားများတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။
ဂိုဂဲလ် မှ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို ရပ်ဆိုင်ဖို့ကြေညာလိုက်ခြင်းကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံမှာ သန်းနှင့်ချီသော အင်တာနက်သုံးစွဲနေသူများ တုန်လှုပ်စိုးရိမ်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းများတွင် ထုတ်ဖော်ရေးသား ဖော်ပြထားကြပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံမှာ အင်တာနက် သုံးစွဲနေသူ သန်း ၃၀၀ ကျော်ရှိပြီး၊ တပတ်လျှင် နာရီပေါင်း ၂ ဘီလီယံ ကျော် သုံးစွဲလျှက် ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။ တရုတ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူများနှင့် အစိုးရ၀န်ထမ်းများလည်း ဂိုဂဲလ်အီမေး အကောင့်များကို သုံးစွဲနေကြပါသည်။ ဂိုဂဲလ် ကုမ္ပဏီ သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှာ စတင်ခဲ့ပြီး၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ တရုတ်ဘာသာဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ကို အလုပ်သမားပေါင်း ၇၀၀ ကျော်ဖြင့် လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပါသည်။ ဂိုဂဲလ် ကုမ္ပဏီ သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် တနှစ် သန်း ၃၀၀ ၀င်ငွေရှိကြောင်းလည်း သတင်းများတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ အလုပ်သမားအများစုဟာ လစာကောင်းကြသည့် ကွန်ပြူတာ အင်ဂျင်နီယာများ၊ System အင်ဂျင်နီယာများ နှင့် Network အင်ဂျင်နီယာများ ဖြစ်ကြပြီး၊ အလုပ်အကိုင်များလည်း ဆုံးရှုံးမှာ ကို စိုးရိမ်နေကြကြောင်းသိရှိရပါသည်။
တရုတ်အစိုးရက စံနစ်တကျ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲပြီး အင်တာနက်သုံးစွဲသူများ နှင့် ကုမ္ပဏီများ ကို နည်းမျိုးစုံအကြိမ်ကြိမ် တိုက်ခိုက်နေမှု၊ ဆင်ဆာများပိတ်ဆို့ထားခြင်းကြောင့် လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် များပိတ်ဆို့ခံနေရကြောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်သူများအဖွဲ့ နှင့် နိုင်ငံတကာ အစိုးရများ က ပြစ်တင်ဝေဖန် ခဲ့ကြသည်။ တရုတ်အစိုးရသည် တရုတ်အင်တာနက်သုံးစွဲသူများအား Facebook နှင့် Twitter တို့သုံးစွဲမှုကိုလည်း တားမြစ်ထားပြီး၊ Youtube သုံးစွဲမှုကိုလည်း ပိတ်ပင်ဟန့်တားထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဂိုဂဲလ် ကုမ္ပဏီ က အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကိုရပ်ဆိုင်း ပစ်ဖို့စဉ်စား နေပြီလို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာ လိုက်ပြီးနောက် မကြာမီမှာပဲ တရုတ်အင်တာနက် သုံးစွဲသူများဟာ ဂိုဂဲလ် ကုမ္ပဏီ ဌာနချုပ်ကို လာရောက်ကြပြီး ဂိုဂဲလ် ကုမ္ပဏီရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ထောက်ခံကြောင်း နှင့် တရုတ်အစိုးရရဲ့ လုပ်ရပ်တွေအတွက် ၀မ်းနည်းကြောင်း ပြသခဲ့ကြတယ်လို့ နိုင်ငံတကာ ရုပ်မြင်သံကြားများ နှင့် သတင်းစာ များ၌ပါ ဖော်ပြထားကြသည်။ တရုတ်အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ ဂိုဂဲလ် ကုမ္ပဏီရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အသေးစိတ်သိရှိဖို့ လေ့လာသွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီး၊ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန် က တရုတ်အစိုးရရဲ့ ဖြေရှင်းချက်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရှိနိုင်ဖို့ တောင်းဆိုထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။
တရုတ်အင်တာနက်သုံးစွဲသူများက ဂိုဂဲလ် ကုမ္ပဏီ တရုတ်နိုင်ငံက ထွက်သွားခြင်းဟာ တရုတ်နိုင်ငံ အနေဖြင့် ကမ္ဘာကြီးအပြင်ကိုထွက်ခွာသွားတာနဲ့တူတယ်လို့ ၀မ်းနည်းစွာဝေဖန်ပြောဆိုနေကြောင်း သတင်းများတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
Posted by Burma Golf Club at 10:09 PM3comments Links to this post
Burmese junta already manipulating upcoming poll
With no clear timeline for the planned election, the regime is working to preserve the status quo
Burma's strongman, General Than Shwe, was more than happy to confirm that there will be an election in his country this year. The problem is, and will remain for the foreseeable future, the lack ofaclear timeline for when the election will be held. Furthermore, none of the necessary laws and measures to make the upcoming poll transparent, free and fair have not been enacted.
The US State Department has made these points clearly, saying: "We have not seen any meaningful steps by the regime to indicate it is putting in place measures that would lead to credible elections. Much of the opposition's leadership remains in prison, there is no space for political dissent or debate, and no freedom of the press. We continue to urge the Burmese government to address these issues and to engage [the main opposition leader] Aung San Suu Kyi and the democratic opposition, ethnic leaders and other stakeholders inacomprehensive dialogue on democratic reform. This would beafirst step towards inclusive elections."
Despite suchastrong international appeal, the military regime is still stubborn. Obviously, the junta wants to ensure victory in the election because it would be disastrous if it loses again. In May 1990, the junta cheated in the polls and won byasupposed landslide against the opposition National League for Democracy, led by Suu Kyi. So, the regime will not make the same mistakes again.
The reason for keepingatight rein over the election date is purely tactical. The announcement will be made when the junta's handpicked cronies are ready to enter the race. The suspicion is that the election could be held late in the second half of the year, toward the third quarter. The contracts that international humanitarian and relief organisations have with the regime will end in June this year. Renewal of these contracts is not expected. It would takeafew weeks for all of their representatives to leave the country. And this is what the junta wants. To hold an election under the watchful eyes of foreign representatives would beacatastrophe.
The regime wants to transform the international relief efforts into votes for it or its surrogates, especially in the area of the Irrawaddy Delta, which was hard-hit by Cyclone Nargis in May 2008. This will not be easy, as these Burmese villagers are now more independent in helping themselves, with some direct assistance from abroad. The role of the burgeoning village-based civil groups, although they are still nascent, could be influential in determining the future of the Burmese junta. The regime is monitoring the activities of local community leaders to prevent any upheaval in the future.
The regime also wants to use the timing to disarm the opposition, including minority groups that have adopted plans to contest the poll. The National League for Democracy, for example, has complained that its representatives are not allowed to hold meetings. Suu Kyi informed top US diplomats of her political plight when they visited her in early November last year.
The regime must come clean on the election. The US and the Association of Southeast Asian Nations, of which Burma isamember, have called for an inclusive election that will allow all stakeholders to partake in the political process. So far, the regime has been evasive in its response. It's the same old story of tactical delays.
Of course, after the election there could be dire consequences. After all, everybody can read the tea-leaves. The generals will likely behave as despicably as they always have, closing all loopholes that might jeopardise them in any way. The outcome could affect the Burmese people as never before. If there is obvious rigging of results, the people might not accept the outcome, and that could lead to the same kind of chaos as in 1988 and 1990. The people have been pushed too far already.
Posted by Burma Golf Club at 3:59 PM0comments Links to this post
ယနေ့ ကျရောက်သည့် (၆၂)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့တွင် JAC မှ ဦးဆောင်ပြီး ဂျပန်ရောက် ဒီမီုကရေစီအင်အားစုများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများကစုပေါင်းပြီး လွပ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို TOKYO SHINAGAWA ရှိ နအဖ စစ်အခွန်ရုံးရှေ့၌ ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ ယင်းအခမ်းအနားကို နိုင်ငံရေးအဖွဲ့စည်းအသီးသီးမှ အင်းအား ၁၅၀ ခန့် တတ်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ အခမ်းအနားကို ညနေ ၃း၃၀ မှ ၅ နာရီအထိ ကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
တက်ရောက်လာသူများက မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးနေ့၌ မြန်မာပြည်သူများ လွတ်လပ်မှုမရှိပဲ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ထဲမှာပင် ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံနေရကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်သားများကို ထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားပြီး၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့်အစီအစဉ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံ့ချကြောင်း နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို ခြွင်းချက်မရှိ လွတ်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
၆၂ နှစ်မြောက် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးနေ့၌ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူအခွင့်အရေးတွေကို ချိုးဖောက်ပြီး၊ လူသားများအပေါ် ပြစ်မှုကျူးလွန်နေကြသော နအဖ စစ်ခေါင်းဆောင်များကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှု့ချခဲ့ကြပြီး၊ အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေး ကြွေးကြော်သံများဖြင့် အခမ်းအနားကို ရပ်စဲခဲ့သည်။
Posted by Burma Golf Club at 10:58 AM0comments Links to this post
PM Gordon Brown Hoping To Help Burmese People Regain Their Future
Source: Office of the UK Prime Minister
ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချူပ်ဂေါ်ဒွန်ဘရောင်း က မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာဖို့ အတွက် အစွမ်းကုန် ကျိုးပမ်း လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ဂတိပြုပါကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံသို့ပေးပို့သော နှစ်သစ်ကူး သ၀ဏ်လွှာ မှာ ရေးသားဖော်ပြထားပါသည်။
ယင်းနှစ်သစ်ကူးသ၀ဏ်လွှာ၌ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး၊ မြန်မာပြည်သူလူထု အကျိုးနှင့် မျှော်လင့်ချက်များ ကိုရှေ့ရှု့ ပြီး နအဖ စစ်အုပ်စု ခေါင်းဆောင်များနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ အကြား အပြုသဘောဆောင်ပြီး၊ တိုးတက်မှုရလာဒ်များ ထွက်ပေါ် လာအောင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ရန် နအဖစစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်များ ကို တိုက်တွန်းထားပြီး၊ ၂၀၁၀ မှာ နအဖ စစ်အုပ်စုက ကျင်းပပေးမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများအားလုံး ပါဝင်နိုင်သည့် အခြေအနေ ရှိမှသာ တရားမျှတ သည့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မှာ ဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်းရေးသား ဖော်ပြထားသည်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်ပေးမှု၊ လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတသည့်ရွေးကောက်မှုရှိမှသာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းသို့ ပြန်လည်လည်ရောက်ရှိလာစေမှာဖြစ်ကြောင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအစိုးရများ၏ ထောက်ခံမှုကိုရရှိလာစေမှာဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းသ၀ဏ်လွှာကို နအဖစစ်အုပ်စု၏ တာဝန်ရှိသူများထံ ရန်ကုန်မြို့ ဗြိတိန်သံရုံးမှတဆင့် ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အပြည့်အစုံကို အင်္ဂလိပ်လိုဖြင့် အောက်မှာဖတ်ရှု့ နိုင်ပါသည်။
Dear Daw Suu
You have dedicated the whole of your life to the cause of democracy and freedom in Burma. You have selflessly highlighted the wider suffering of the Burmese people rather than dwelling on your own pain. And through that courage you have gained the respect of the entire international community not just foraperson, but foracause.
The world knows that as Burma approaches an historic year you will be as resolute as ever in approaching its challenges. If the scheduled elections proceed underarigged constitution, with opposition leaders excluded and with no international oversight, the military rulers will be condemning Burma to more years of diplomatic isolation and economic stagnation.
But if the elections are genuinely inclusive, free and fair, then the whole of the international community is ready to stand with Burma, welcome her back into the community of nations, and contribute to rebuilding her future and prosperity. It is clear this is the only path which will lead to Burma’s future security, stability and progress for all her people.
Sadly, as the year turns, the signs do not look good. Your continuing detention is only the most visible evidence of the bad faith ofaregime which has so far shown no signs of listening to regional or international calls for an end to its violent behaviour.
I continue to call upon the regime to engage with you and allow you further contact with diplomats in Rangoon, and to startagenuine dialogue that can give the Burmese people back their future and their hope.
You have asked us to use our freedom to secure the freedom of the Burmese people. I assure you that as we move intoanew year andanew decade the United Kingdom will continue to do everything possible to advance positive change and genuine democracy in your country.
As you have said, there is so much that needs to be done inaBurma that cannot afford to wait.
We are immovably with you – and with the Burmese people.
Posted by Burma Golf Club at 9:30 PM0comments Links to this post
ဂိုဂဲလ်၏ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း တရုတ်နိုင်ငံမှ...
PM Gordon Brown Hoping To Help Burmese People Rega...